Bambi ကြိုက် တာ တော့ ၁၀၀ ရာနှုန်း တူနေပြီ..
မကြာ ခဏ သားတွေ နဲ့ နေရာလုရင်း ကြည့်..
အကြိ်မ်ပေါင်း မရေမတွက် နိုင်အောင်
ကြည့် ပေ မဲ့ ..ကြည့် တိုင်း လဲ .. ခံစားချက်တွေ က ရိုး မသွားပဲ... လှပ သစ်လွင် သလို ခံစားရ...။
သားတေကွ ပါဝါ ရိန်းဂျား သိပ်ကြိုက်ပေမဲ့
Bambi ကိုတော့.. ပိုကြိုက် ကြတာလေ..
ထင်ပါတယ်.. တစ်ကမ္ဘာ လုံးက ကလေး လူကြီး အားလုံး ကြိုက် ကြမှာပါ..
Bambi အမေ ဆုံးသွား တဲ့ အခန်း
အမေ ကို လိုက်ရှာနေတဲ့ အခန်းဆိုလဲ..
သားတွေ လဲ ငို.. မေမေလဲ ငို..
The Platinum Edition က ကြည့်လို ပို လှပေမဲ့
Walt Disney ပန်းချီကျော်တွေ လက်နဲ့ ဆွဲ
အားထုတ်ခဲ့တဲ့ အဟောင်းလေးကို တော့
တန်ဖိုးမဖြတ်နိုငအောင် မြတ်နိုးဆဲပါ ပဲ...။
ဗဟုသုတ အသစ်တွေ ရစေတဲ့
ဒီပို့စ်လေး ကို အရမ်း နှစ်သက်မိပါတယ်...။
ရွေးပေးထားတဲ့ Secret of life နဲ့ April Shower ကိုကြည့်လိုက်မိတာနဲ့တင်..ဒီကာတွန်းလေး ရဲ့တန်ဖိုးနဲ့..အားထုတ်မူ..အနုပညာကို သိသွားလိုက်တယ်။ ဟုတ်တယ်..horror တွေ stupid reality တွေထက်စာရင်..ဒီလိုကားလေး တွေက..လူကြီးရော..လူငယ်ရော.. နှလုံးနွေးစရာ..အကောင်းမြင်တတ်ဖို့..ဘ၀ကိုလက်ခံတတ်ဖို့..ရုန်းကန်တတ်ဖို့.. အများကြီး ပေးစွမ်းနိုင်တာပဲ။ တကယ်ပြောတာ..ကာတွန်းတွေ သိပ်မကြည့်ဖြစ်တော့.. မသိဘူး။ ငယ်ဘ၀ကလည်း..တီဗီကာတွန်းကားတွေနဲ့..ဝေးကွာလှတာမို့.. ကြားထဲမှာ..ကာတွန်းတွေနဲ့..ထိတွေ့စရာအကြောင်းကိုမရှိခဲ့ဘူး..။ ကလေးတွေနဲ့လည်း..ထိုင်ကြည့်စရာ အကြောင်းမရှိခဲ့။ ဘာပဲပြောပြော..အချိန်ရင်တော့.. ညွှန်းထားတာလေး..ငှားကြည့်ပါဦးမယ်။
ဘာရီးလဲ အစ်ကို.. သာမီးသိဝူးးးး....
တင်ပေးထားတဲ့ယူကျုကြည့်သွားပါတယ်။ သေချာကြည့်ပြီး သေချာရေးပြထားတာ ကျေးဇူးပါ..
(5stars ပေးမလို့ သူများဦးသွားတယ်)
ကာတွန်းကားရိုက်ရင် အခက်အခဲတွေ အကြောင်းလည်း ခုမှ သိတယ်။ တကယ်တော့ ၂ ခုလုံးမကြည့်ဖူးသေးဘူး..
အကို ဗီဗါလီဟီးလ် ချဝါးဝါး တို့ မဒဂါစကာ ၂ (အာဖရိကားမှ လွတ်မြောက်ခြင်း) တို့ ကြည့်စေချင်တယ် ဒူကဘာတော့ ဂျူနီယာ ဒူကဘာ နဲ့ ဘစ်လော့ဒ် ဒေါင်းလုပ် တန်ခိုးနဲ့ ကြည့်ပြီးပြီ DVD ကွာလတီနဲ့ ကြည့်လို့ ရပြီ ...ကောင်းလို့ ညွန်တာပါ။
ဒီကားကို ကလေးတုန်းက ရုံကြီးမှာ ပါပါလိုက်ပြလို့ ကြည့်တယ်။ ခုတော့ အခွေဝယ်ကြည့်တယ်အစ်ကို။ သမင်လေးအတွက် ငိုရတာ အမောပေါ့ အစ်ကိုရာ ..
အခုလို တခုတ်တရ ဆုံးမတာကျေးဇူး ကိုကြီးရေ...
နန်းညီ: မန့်မရလို့ ဒီမှာပဲရေးသွားပါတယ်.. ကျေးဇူးအထူး (အထူး) တင်ပါတယ်.. ဒီ cartoon society လေး ဒီလိုရှိတာလာ ၀မ်းသာပါတယ်
ကျွန်တော်လည်း ကာတွန်းကား Crazy ပဲအစ်ကိုရေ..။ အခုထိကြည့်တုန်း..။ သူတို့နဲ့အတူ လိုက်ပျော်တုန်း...။ သူတို့နဲ့ အတူငိုတုန်းပဲ...။ :)
မမ - နှစ်သက်ကြောင်းသိရလို့ ၀မ်းသာပါတယ်...
မကေ - Bambi ကိုတော့ ကြည့်ဖြစ်အောင် ကြည့်လိုက်ပါဗျာ ... ကာတွန်းကားတွေ မကြည့်ဖြစ်တဲ့ အကြောင်းကို အပြည့်အ၀ နားလည်ပါတယ်ဗျာ...
Sin dan lar - သူများ ဦးသွားလည်း ထပ်ပေးလို့ ရပါတယ်ဗျ...
ဒူကဘာ - ဘစ်လော့ဒ် ဒေါင်းလုပ်အကြောင်း မသိသေးဘူး ပြောပြပါဦးဗျ...
မတူး - အင်း... ငိုလိုက် ရီလိုက် ပါပဲလေ...
ယောနသံစင်ရော် - တခုခု ရသွားတယ်ဆိုရင်ပဲ ရေးရကျိုးနပ်ပါတယ် ညီမရေ့...
နန်းညီ - မန့်မရဘူးဆိုလို့ ဒီမှာ မန့်ပေးထားတာ...
အိပ်မက်နက် - ခံစားတတ်တဲ့ နှလုံးသား တခုက ပါလာတာကိုး...
ကာတွန်းကားကြိုက်တာကို ၀င်ပြီးဖြောင့်ချက်ပေးလိုက်ပါတယ် ကိုအောင်ရေ ...။
မြန်မာပြည်က ထွက်မလာခင်က ကာတွန်းကာတွေ ကား ၂၀ စီလောက်စုထားတဲ့ DVD တွေ ဆက်တိုက်ကြည့်ခဲ့သေးတယ် ...။
ဆောင်းတွင်းမှာ bambi သစ်ခေါက်လေးစားနေရတဲ့ အခန်းကလည်း ကြေကွဲစရာပဲ .... ။ Thumper ခြေထောက်ကို တဖုန်းဖုန်းရိုက်တာကိုလည်း သဘောကျပါတယ် .... ။
bambi အမေသေသွားတဲ့အခန်းကတော့ သနားစရာ အကောင်းဆုံးပဲ ...။
ကာတွန်းတွေကို ကျွန်တော်တို့ကြိုက်ကြတာ ...လှပတဲ့သဘောတရားတွေကို cartoons တွေမှာပိုပြီးတွေ့ရလို့ထင်တယ်ဗျ ... ။ အချင်းချင်းကူညီမယ် ... ကိုယ့်လောကကို ပိုကောင်းအောင်လုပ်မယ် ... အခက်အခဲကို ရင်ဆိုင်မယ် ...။ ကာတွန်းတွေကပေးတဲ့ ဒဿနက ရိုးရိုးလေးနဲ့လှတယ် ...။
Walt Disney မှာက လေတိုက်တာ ... သစ်ရွက်ကြွေတာတို့ကို animation လုပ်ပြီးသားတွေအများကြီးရှိတော့ ကြည့်လို့အရမ်းလှတယ် ...။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်နဲ့ဝါသနာတူတဲ့လူတွေ အများကြီးရှိနေလို့စိတ်ပိုချမ်းသာသွားပါတယ်ဗျာ ...။